आधाभूत सहकारीका अध्यक्ष देवकोटा दम्पतिद्वारा जालसाजी गरेर जग्गा ठगी : पीडितलाई मस्तिष्कघात | Diyopost - ओझेलको खबर आधाभूत सहकारीका अध्यक्ष देवकोटा दम्पतिद्वारा जालसाजी गरेर जग्गा ठगी : पीडितलाई मस्तिष्कघात | Diyopost - ओझेलको खबर
आधाभूत सहकारीका अध्यक्ष देवकोटा दम्पतिद्वारा जालसाजी गरेर जग्गा ठगी : पीडितलाई मस्तिष्कघात
दियो पोस्ट बिहिबार, चैत्र १७, २०७८ | १५:०३:०३
काठमाडौं । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा कार्यालय रहेको आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका उच्च अधिकारीले किर्ते गरेर जग्गा ठगी गरेको पाइएको छ । अध्यक्ष खड्ग देवकोटा र प्रबन्धनिर्देशक (देवकोटाकी पत्नी) सविना वाग्लेको योजनामा एक ऋणीलाई थाहा नै नदिई करोडौँको जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको हो ।
स्थायी घर दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–७ भएकी स्वस्थानी केसीको करोडौंको जग्गा सहकारीका अध्यक्ष देवकोटा र उनकी श्रीमती तथा प्रबन्धनिर्देशक सविना वाग्ले मिलेर ठगी गरेका छन् । काठमाडौंको ठमेलमा इन्स्पायर्ड ट्राइभ आयुर्वेद रेष्ट्रो एण्ड बार सञ्चालन गरी बस्ने स्वस्थानी केसीको व्यवसाय राम्रै थियो । उनले व्यवसायबाटै कमाएको रकमबाट चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित कित्ता नम्बर २३४४ मा करिब ३ सय ९ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरेकी थिइन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि स्वस्थानीले सञ्चालन गरेको रेष्टुरेन्ट व्यवसाय समेत प्रभावित बन्यो । आर्थिक समस्याले समेत गाँजेपछि उनले इन्द्रचोकस्थित अनुसा सुनचाँदी पसलका मालिक कृष्ण रामदामसँग भेट गरिन् । रामदामले धितोमा सुन राखेर छ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण दिए । उनले अनुसा सुनचाँदी पसलमै आफूसँग रहेको १७ तोला सुन धितो राखिन् ।
‘३८ वर्षको उमेरमा ५०÷६० लाख पैसा र १८ तोला सुन कमाएछु । इन्द्रचोकस्थित अनुसा सुनचाँदी पसलका मालिक कृष्ण रामदाम, श्रीमती शोभा रामदाम, सरोज रामदाम भन्ने भाइ थिए । सोही सुन पसलमा म पनि सुन बनाउन जान्थेँ,’ स्वस्थानीले भनिन्, ‘मसँग भएको १८ तोला सुन राखेर सोही सुन पसलबाट छ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिएको थिएँ । ब्याज मासिक एक लाखको दुई हजार रुपैयाँ तिर्नु भनेको थियो । मैले ब्याज बुझाउँदै आएको थिएँ ।’
तर, उनले ब्याज बुझाउँदै आएको केही समयमा नै सुन पसले रामदामले तुरुन्तै सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिए । ब्याज बुझाउन इन्द्रचोकस्थित अनुसा सुनचाँदीमा पुगेकी उनलाई पसले रामदामले सहकारीबाट ऋण लिएर भए पनि सबै सुन धितोको चुक्ता गर्न भनेका थिए । निकै दबाब दिएपछि स्वस्थानीले हुन्छ भनी सहमति जनाइन् । रामदामले आफ्नै पसलबाट अर्को भवनतर्फ देखाउँदै आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारीतर्फ देखाएर ‘मेरो आफ्नै सहकारी हो ऋण लिनुस् र मलाई फिर्ता गर्नुस् भनेर दबाब दिएपछि पछि आफूले सहकारीबारे थाहा पाएको स्वस्थानी बताउँछिन् ।
‘त्यो सहकारीसँग मैले कारोबार गर्छु । तपाईंको लालपुर्जा अन्त राख्न पर्दैन भनेपछि मैले मेरो श्रीमान् पनि हुनुहुन्न । म सल्लाह गरेर भन्छु भनेँ,’ स्वस्थानीले सुनाइन्, ‘अलि छिटो गर्न भनेर फोन गरेर दबाब दिन थाल्यो । पैसा झिक्ने कि नझिक्ने भन्दै दबाब दिन थाल्यो । त्यत्रो गहना लगेर राखेको छु । यसै पनि म केटी मान्छे । जग्गा बचाउनु कि पैसा झिक्नु भन्नेतिर सोचेँ ।’
दबाबकै बीचमा उनले सहकारीले जग्गा हेर्नेसम्मको कुरा भएको र ऋण लिने कुरा भएको बताइन् । ‘३ दिनपछि जग्गा हेर्न जाने कुरा भयो । मैले नै ट्राभल्सलाई भनेर गाडी मिलाएँ । यहाँबाट गाडी लिएर सुन पसले र म हिँड्यौँ । तल पुगेपछि एक जना महिला गाडीमा चढिन् । उहाँ पिसाब फेर्न गएको बेला मैले सोधेँ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ को हो भनेर ? उहाँ नै हो सहकारीको साहुनी भनेर सुन पसलेले चिनाए । मेरो जग्गा उहाँकै सहकारीमा राखेर पैसा निकाल्ने हो ? भन्ने मेरो प्रश्नपछि सुन पसले रामदामले हो भने । चितवन पुगेपछि मेरो जग्गा जब उनीहरुले हेरे । उनीहरु दुई जना कानेखुसी गर्न थाले । सहकारीको साहुनी भनेर चिनिएकी व्यक्ति नै–सहकारीको प्रबन्धनिर्देशक तथा अध्यक्ष देवकोटाकी पत्नी रहिछन् ।’
चितवनमा सुन पसले रामदाम र सहकारीको साहुनी भनिएकी देवकोटाबीच शंकास्पद कुराकानी हुने गरेको र आफूलाई गुमराहमा पारिएको स्वस्थानीको दाबी छ । ‘ऋण दिने र जग्गा हेर्ने भनेर गएका सहकारीका साहुनी र सुन पसले हामीले बुकिङ गरेको होटलमा बसेनन् । उनीहरु कहाँ गए मलाई थाहा भएन,’ स्वस्थानीले भनिन् । चितवनमा आफूलाई सहकारीले ऋण दिन नसक्ने बताएपछि आफू एक्लै काठमाडौं फर्किएको पीडित स्वस्थानीको भनाइ छ ।
दुई÷तीन दिनमै सुन पसले रामदामले ‘बहिनी पैसा दिने भयौँ’ भन्दै फोन गरेपछि फेरि भेटघाट भएको स्वस्थानी बताउँछिन् । ‘उनीहरु मेरो रेष्टुरेन्टमा परिचय गरौँ भनेर आए । तपाईंको रेष्टुरेन्टमा सहकारीको साहु सबै बसेर खाना खाऔँ भनेर उनीहरुले प्रस्ताव गरे,’ स्वस्थानीको कथन छ, ‘हुन्छ दाइ भनेर हामीले रेष्टुरेन्टमा खाना पकाएर बस्यौँ । परिवारबीच मिलन हुने भन्ने कुरा भयो । टेबुलमा मलाई सहकारीको साहु भनेर चिनाए । मैले नमस्ते गरेँ । साहुनी भनेर मलाई चिनाए । ऋण दिनुहोला भनेर पठायौँ । कागजमा मेरो कुनै हस्ताक्षर गरिएन ।’
केही दिनमा सहकारीका मान्छेले फोन गरेर खाता समेत खोल्न आउन नपर्ने भनी सहकारी आफैँले खाता खोलिदिएको उनको भनाइ छ । ऋण मिलाएबापत ३ लाख रुपैया“ घुस ! ऋण दिन तयार भएको सहकारीले आफूसँग ३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको समेत पीडित महिलाको दाबी छ । ‘तपाईंलाई ऋण दिने कुरा भित्र–भित्र मिलाइसक्यौँ । अब तपाईंले हामीलाई ३ लाख रुपैयाँ घुस दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरे । मैले कहाँबाट ल्याएर दिने भनेर प्रश्न गरेँ । सुन पसलेले नै घुसको प्रस्ताव गरेको हो । ऋण मिलाइदिएबापतको प्रतिशत हो घुस होइन भन्नेसम्मको कुरा भयो । मैले फेरि तीन लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रुपमा ऋण काढेँ । त्यति नै बेला मलाई ल ऋणको कागज मिलाएर आउने भनेर चितवन जाऊँ भन्ने प्रस्ताव आयो,’ पीडित स्वस्थानी भन्छिन्, ‘हामी चितवनको पर्सा मालपोत गयौँ । म मालपोतभित्र पनि प्रवेश गरिनँ ।’
सहकारीका साहुनी भनिएकी व्यक्तिले रामनगरबाट एक जना मान्छे समेत गाडीमा बसाएकी थिइन् । स्वस्थानीलाई उनको परिचय गर्दा मालपोत भनेर चिनाइएको थियो । ‘त्यही मान्छेले मेरो लालपुर्जा लिएर भित्र हिँडे । बाहिर नै बसेर कागज बनाउने कुरा भयो । १/२ घण्टा लाग्छ । तपाईं ३ लाख रुपैयाँ मिलाउँदै गर्नुस् । हामी कागज मिलाउँदै गर्छौं भनेर लागे । काठमाडौंबाट ३ लाख रुपैयाँ आईएमई गरेर मगाएँ,’ उनले भनिन्, ‘कागज तयार भएपछि तपाईंसँग पैसा रेडी भयो भनेर सोधे । मैले तीन लाख रुपैयाँ पैसा मिलाएको हुनाले मिल्यो भनिदिएँ।’उनले थपिन्, ‘तपाईंले जग्गा बेच्न लागेको हो कि, दृष्टिबन्धक राख्ने हो कि भनेर स्पष्ट केही सोधेन । मलाई ३० लाख रुपैयाँ ऋण दिने भनिएको थियो । मैले मिल्यो भनेँ । तर, ऋण दिने भनेर बनाएको कागजचाहिँ मेरो पुर्जा अर्कैको नाममा जग्गा पास गर्ने भनेर कागज बनाएको रहेछ ।’
अन्ततः सोही बेला स्वस्थानीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २३४४ नम्बरको जग्गाहरु सहकारीका साहुनी भनिएकी सविना वाग्लेको नाममा राजीनामा पास भएको रहेछ । ‘मैले त्यतिबेला जग्गा पास भएको भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । जब राति त्यो कागज बनाएपछि फर्किएर काठमाडौं आएँ । त्यो कागजमा साइन गर्न बेलुका साढे ७ बजे आउनुस् भनेर बोलाइयो । सहकारी गएँ । उनीहरुले फाइल दिए । मैले साइन गरेँ । अहिले नै मेरो ऋणको पैसा हाल्दे अनि साइन गरौँलाई भन्न त मिल्दैन । पैसा त खातामा हाल्ने हो नि ! ऋण खातामा आउला भनेर मैले साइन गरिदिएँ । भोलिपल्ट त्यही सुन पसले आयो । उसले एउटा चेक बुक पनि बोकेर आयो । ल बहिनी त्यो सुनको पैसाको चेकमा साइन गरिहाल्नु भन्यो । म खुसी भएर हस्ताक्षर गरिदिएँ । अब मेरो सुन पनि आउने भयो । बाँकी भएको पैसाले मैले काम गर्ने भएँ भनेर खुसी भएँ । तर, त्यो पैसा त झिकेर सुनपसलेले लगेछ’, उनले भनिन्, ‘अर्को मान्छेलाई चेक काटेर पठाउँदा सहकारीले पैसा दिएनछ । चार लाख २० हजारको चेक फर्किएर आयो । अर्को पनि चेक दिएको थिएँ । त्यो पनि फर्किएर आयो । सुरुमा मलाई एक्सक्युज माग्यो । होइन म मिलाइदिन्छु । हामी ठूलो ठूलो अर्बको कारोबार गर्ने मान्छे तपाईंको सानो कारोबार मिलाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइयो ।
एकछिन पर्खनुस् तपाईंको पैसा खातामा आउँछ भन्ने कुरा गरियो । धेरै ठूलो मान्छेसँग मेरो संगत भएछ भनेर म फोन राखेर बसेँ । फेरि अर्को चेक लिएर जाँदा पैसा दिएन । १२÷१५ दिनसम्म पैसा नदिएपछि म सुन पसलमा गएँ । तर एक पैसा पाइनँ ।’ केही दिनपछि सुन पसलमा सुन फिर्ता माग्न जाँदा सुन पसलेकी पत्नीबाट आफ्नो जग्गा सहकारीको साहुनी भनिएकी सविना देवकोटाले ठगी गरेको चाल पाएको उनको भनाइ छ । ‘म त छक्क परेँ । तपाईंको सुन पनि गालेर मासिसक्यो भन्यो । फिर्ता दिन सक्दैन । यसले नभनेको मात्रै हो । जग्गा पनि सहकारीको साहुनी भन्ने महिलाको नाममा पास गरेर लगिसक्यो भनेपछि म जालसाजीमा परेको थाहा पाएँ’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि म सहकारीमा गएँ । ठीकै छ मेरो जग्गा लानुभएको रहेछ । भनेको समयमा म पैसा तिर्छु । मलाई पैसा दिनुस् न त ठीकै छ । तर, पैसा मेरो खातामा आएन । यसै त म गर्भवती मान्छे । दिनैपिच्छे म सहकारी गएँ । म रोइकराइ गर्न थालेँ । करिब ५ महिना धाएँ । उनीहरुले ६ महिने अवधिको ऋण दिने भनेका थिए । त्यही कृष्ण रामदामलाई झिकेर पठाएको पैसा पनि मैले तिर्नुपर्ने भयो । त्यही पैसा पनि तिर्नुप–यो । पैसा तिर्न जाँदा तपाईंको खातामा पैसा हालेको हाल्यै छ पैसा किन नझिकेको भनेजस्तो कुरा गरे ।’
यसरी सहकारीको जालसाजीमा परेकी स्वस्थानीलाई एक्कासि ब्रेनह्यामरेज भयो । मस्तिष्काघातबाट पीडित उनी अहिले हिँड्न समेत नसक्ने अवस्थामा बन्धक भएर बसेकी छिन् । ‘सहकारीवालाले मेरो सारा सम्पत्ति मात्रै खाएन मेरो जीवन नै ध्वस्त पारिदियो’, उनले भनिन्, ‘म अहिले कानुनी लडाइँमै छु । तर, अस्वस्थ शरीरले कसरी यो लडाइँ लडौँ ?’
स्वस्थानीको बयानसँग मिल्ने गरि सविनाले नैै दायर गरेकी छिन् मुद्दा !
उच्च अदालत पाटनमा स्वस्तानी केसी सहित पत्रकार ऋषी धमला विरुद्ध सहकारीको पक्षबाट अध्यक्ष खड्कबहादुर देवकोटा र उनकी पत्नि सविना देवकोटाले निषेधाज्ञा मुद्दा हालेकी थिइन् । सहकारीबारे समाचार लेख्ने भन्दै पत्रकार ऋषी धमलाले धम्की दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले समाचार रोक्न माग गर्दै निवेदन हालेका थिए । निवेदनमा सविनाले २०७५ साल चैत्र २२ गते नै आफूले स्वस्थानीको जग्गा खरिदका लागि ३० लाख रुपैयाँ दिएको दाबी गरेकी छिन् । स्वस्थानीकाो दाबी अनुसार चैत्र २४ गते उनको जग्गा सहकारीमा धितो राखिएको थियो । तर, धितोमा राख्न भनिएकाो जग्गा कसरी सविनाको नाममा पास हुन पुग्यो त्यो बारे देवकोटा परिवार चुपचाप छ ।
बिहिबार, चैत्र १७, २०७८ | १५:०३:०३